ukuqokelelwa eyoyikisayo uyeza ingabuyeli imali oyibolekileyo?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ ukuqokelelwa eyoyikisayo uyeza ingabuyeli imali oyibolekileyo?
Kwi movie nemidlalo yeqonga i zemali kwesi sifundo, sigcawu idla ngokubonakala owenza ingqokelela eyoyikisayo nxamnye unetyala.
kangaka kude abo abangazange Siboleke imali evela kumaziko zemali, ube yinxalenye omhle kakhulu.
ngenxa yokuba lo hlobo nkongozelo, ngaba senziwe ehlabathini lokwenene? Sashwankathela ibali eneenkcukacha.
yaye ngokusisiseko akukho ingqokelela, ezifana umdlalo
umbolekisi, ukusongela ukusuka into yokuqala kusasa enga iyagqabhuka ucango ngamandla, ube abaninzi abantu babe umfanekiso, njenge.
Noko ke, Andiyi kuninika ngokwenene kuqala kukuba ababolekisi imali ukwenza ingqokelela enjalo. Ukuba
ngenxa yokuba, ngokuba ezehlisa umfanekiso wequmrhu ukuba into enjalo.
ingqokelela ekuthiwa eyoyikisayo ke, ukuba ucinga ukuba ezo ezenziwa nemali ubumnyama ezifana nemigulukudu kulawulo beziya kuqheleka. E
, kunye ababolekisi imali uxele ukuba enze ntoni uhlobo ukuqokelelwa, ukuba onetyala intlawulo yalibaziseka, ziya kuqhagamshelana ukusuka kwiziko zemali yona ngokohlobo, ezifana ileta yefoni nedilesi ye-imeyile, etywiniweyo.
imigewu akukho ukudibana ngqo.
Nakuba kunjalo, ukuba ngaba awuzithathi umntu kunye nokuqeshwa, oko kwakhona ingaqhelekanga into yokuba ezifana usapho kunye emsebenzini kuza ucingo.
Ngoko ke, ukuze kungabikho ungenakuwuxhalabela kwiqela lesithathu, kuba umhla intlawulo ukuqinisekisa Zama ukuthatha isiqinisekiso.
ukuqokelelwa kukho zizikhokelo wagqiba ilizwe
Eneneni, uyazi ukuba inkampani mali ngokwalo kwezinye iimeko yokuqokelelwa, ezifana drama kusenokwenzeka ukuba ukwaphulwa komthetho? Lisetyenziswa kwi ikhono lobugcisa ukwenza obolekisayo kunye nendlela urhulumente azakuboleka imali
, umba Money nokuboleka uMthetho Business, isekiwe obizwa ngokuba "ummiselo izinto yokuqokelela", besaphula koku kuya kuxhomekeka isohlwayo.
umzekelo, okoko nje kukho asikho isizathu esiphathekayo, kukho imigaqo ekufuneka enze ingqokelela sokuboleka ngaphandle 8:00 pm 9 ekuseni.
Ngamanye amazwi, ezifana ngokuqhubeka ngoyaba umfowunelwa ukusuka egciniswe, okoko nje onetyala asibikho ukunika isizathu, ababolekisa na akuvumelekanga ingqokelela emini njengoko eqala umsebenzi wakho.
Ukongeza, kukho injongo yalo mthetho kukukhusela ingasese onetyala, iphowusta kunye nemiqondiso, kakade, uye nokuqokelelwa kwamatyala ngezwi elikhulu, isenzo okanye Isuwa 'kuphula umthetho. Ngoko ke, isibakala sokuba eli tyala ngeenxa
ayikho ekukhanyeni, ababolekisi nabo kuya kufuneka ahlawule ingqalelo.
ukuthetha umthetho ngale ndlela, ekuqalekeni kunye namaziko karhulumente Financial Arhente Iinkonzo iseke isikhokelo yokuqokelela.
Ngoko, isenzo ngoku wafayo, Shirezu ungase nommangalelwa ukuba umva, ababolekisa bathi nje ukuba ukusebenzisa ukuqokelelwa ngokugqithiseleyo.
i-arhente eqokelela amatyala
Kuxhomekeka amaziko ezemali
, kunokuba nengqokelela ku-endlwini, kukho kwakhona indawo apho isicelo kwi-arhente eqokelela amatyala. Njengaxa
intlawulo abanamathela ngqo ngembalelwano okanye ngomnxeba ukongeza ukuqhagamshelana ifika, njl, zibandakanya ukwenza ingqokelela kwi kancinane ilizwi ngqwabalala ngaphezu amaziko zemali oyingcali kwakhona.
angathanda ukuba uqaphele apha, lenkohlakalo.
inkampani ubuqhophololo abaziveza nokuqokelelwa kwamatyala abanezakhono kwimizobo kutshanje nayo kwandile. Ukongezelela
ukuboleka kwakhona, ekwimo contact, ezifana sijolise kwabo ukuba bahlawulwa umxholo ngenyanga esisigxina yaye mobile, kunye ubuqhophololo inani elingachazwanga labantu. Ezifana
"isivumelwano ayikho phezu okwangoku," "imbopheleleko ukuhlawula kuye kwenzeka", kuba la mazwi ngobuchule kucacisiwe ngokubhala, kungekho ngaphantsi elo tyala ukuba uhlawule nantoni na abantu abangamaziyo belahlekiswa. Logama nje
lingaziwa, ithi ngoyaba kukuba yengcono.
ukuba intlawulo ilibele, nangona ukuqokelelwa eyoyikisayo asiphumi kwiziko zemali, nina nithi ukuba kwiimeko ezininzi ngokuxhomekeke yokuqokelela umsebenzi, efana nokuqokelelwa kwamatyala abanezakhono kwimizobo.
xa kukho ebhaliweyo okanye zoqhagamshelwano, nokunye kuwa ngokukhawuleza, Zama ukufumana isisombululo ekuqaleni.
xa usenza ukuboleka, kubalulekile ukwenza isicwangciso intlawulo ngokucacileyo ngexesha elifanayo. Xa
wayeza kuba ingakumbi lokuhlawula ixesha elide, ukuze abe ifomu ukuhlawula eninzi yaloo umdla mali, Zama ukufumanisa umhla intlawulo wokugqibela kwangaphambili wena.
ezinxulumene / ikhadi ezicetyiswayo mboleko sakho
ukuboleka imali ngosuku olufanayo